Ogaden News Agency (ONA) – Kuxigeenka Madaxwaynaha Maraykanka oo Loo Diiday Inuu Falastiin Booqdo.
Kuxigeenka Madaxwaynaha Maraykanka oo Loo Diiday Inuu Falastiin Booqdo.
Posted by ONA Admin	/ December 11, 2017
Kuxigeenka Madaxwaynaha Maraykanka, Mike Pence oo lagu waday in uu dhamaadka bishan tago dhulka Falastiin ayaa la sheegay in laga codsaday in uusan halkaasi isku imaanin.
Masuuliyiin kamid ah maamulka Falastiin ayaa warbaahinta u sheegay in maamulkooda uusan wax soo dhaweyn ah u sameyn dooninin Madaxweyne kuxigeenka Maraykanka iyagoo sheegay in arrintan ay jawaab u tahay go’aankii dowlada Maraykanku kasoo saartay magaalada Qudus oo ay u aqoonsadeen caasimada Israel.
Mr. Pence ayaa lagu waday in uu booqdo magaalada Baytilaxam ee ku taala daanta Galbeed halkaasi oo ah goobta ay Masiixiyiinta aaminsan yihiin in uu ku dhashay Nebi Ciise CS. Dhulka Falastiin ayay ka bilowdeen banaanbaxyo looga soo horjeedo Maraykanka kadib markii Donald Trump Madaxweynaha Maraykanku uu ku dhawaaqay go’aankooda habeenkii Khamiistu ay soo galaysay.
Mike Pence ayaa kamid ah Kirishtaanka Xagjirka ah ee Maraykanka kuwaasi oo si weyn u taageersan in Israel la wareegto dhulka Falastiin, iyagoo aaminsan hadii ay yuhuuda dhulkaasi qabsadaan in ay soo dadajin doonto Adduunyo-gadoon iyo dib usoo noqoshada Nebi Ciise CS.